सामसुङको एस ९ र एस ९ प्लस स्मार्ट फाेन लन्च, यस्ता छन् विशेषता, मूल्य कति ?
माेबाईल तथा स्मार्ट फोनको विश्व बजार अाेगटेकाे सामसुङले अाफ्ना दुई नयाँ स्मार्ट फाेन लञ्च गरेकाे छ । ‘ग्यालेक्सी एस ९’ र ‘ग्यालेक्सी एस ९ प्लस’ मोबाइल फोन लन्च गरेको हाे । मार्चबाट बजारमा उपलब्ध हुने दुबै फाेनकाे प्रिबुकिङ सुरु भइसकेको छ ।
एस ९ प्लसलाई आइफोन टेनसँग पनि तुलना गर्ने गरिएको छ । यी दुई स्मार्ट फाेनमा केही भिन्नताहरु रहेकाे जनाईएकाे छ । मोबाइल वर्ल्ड कंग्रेस २०१८ को इभेन्टमा लन्च गरिएको ‘सामसुङ ग्यालेक्सी एस ९’ र ‘एस ९ प्लस’मा नयाँ फ्ल्यागशिप स्मार्ट फोन नयाँ क्यामरा, डाटा प्रोटेक्स, भर्जुअल असिस्टेन्ट र इन्टरप्राइज परफमेन्स रहेकाे उल्लेख छ ।
यस्ता छन् विशेषताहरु :
–क्यामरालाई रिडिजाइनका साथसाथै स्मार्टथिङ्ग एप, Knox ३.१ डिफेन्स ग्रेड सेक्युरिटी जस्ता फिचरहरु छन् ।
–यी फोनहरु कालो, खैरो, निलो, पर्पल रंगमा उपलब्ध छन् ।
–यी फोनहरु डस्ट फ्री छन् ।
‘एस ९’ र ‘एस ९ प्लस’मा के छ अन्तर ?
–सामसुङ ग्यालेक्सी एस ९ फोनमा ५.८ इन्चको क्वाड एचडी सुपर एमोलेड स्क्रिन छ । फोनको एस्पेक्ट रेसियो १८.५ः९ छ । यसको पिक्जेल प्रति इन्च (पीपीआई) ५३१ छ ।
–सामसुङ ग्यालेक्सी एस ९ प्लस फोनमा ६.२ इन्चको क्वाड एचडी प्लस कर्व्ड सुपर एमोलेड स्क्रिन छ । यसको पनि एस्पेक्ट रेसियो १८.५ः९ छ । यसको पिक्जेल प्रति इन्च (पीपीआई) ५६८ छ ।
–सामसुङ ग्यालेक्सी एस ९ फोनमा चार जीबीको र्‍याम राखिएको छ । फोन १० एनएम ६४ बिट एक्स्ट्राकोर चिपसेट छ । फोनमा अक्टाकोर क्वालकम स्न्यापड्रेगन ८४५ प्रोससर राखिएको छ ।
–सामसुङ ग्यालेक्सी एस ९ प्लस फोनमा ६ जीबीको र्‍याम राखिएको छ । फोनमा १० एनएम प्रोससरको प्रयोगबाट अक्टाकोर क्वालकम स्न्यापड्रेगन ८४५ प्रोसेसर राखिएको छ ।
–सामसुङ ग्यालेक्सी एस ९ फोनमा ३ हजार एमएएच व्याट्री छ । फोनमा वायरलेस चार्जिङको सुविधा पनि छ ।
–सामसुङ ग्यालेक्सी एस ९ प्लसको व्याट्री सामसुङ ग्यालेक्सी एस ९ को व्याट्रीभन्दा बलियो र टिकाउ छ । किनकी यसमा ३ हजार ५ सय एमएएचको व्याट्री राखिएको छ । यसमा पनि वायरलेस चार्जिङको सुविधा छ ।
मूल्य कति छ त ?
–सामसुङ ग्यालेक्सी एस ९ फोनको सबैभन्दा कम मूल्य ७२० डलर छ । नेपाली रुपैयाँ ७४ हजार ६५४ रुपैयाँ हुन आउँछ ।
–सामसुङ ग्यालेक्सी एस ९ प्लसको सबैभन्दा कम मूल्य ८४० डलर छ । नेपाली रुपैयाँ ८७ हजार ९६ रुपैयाँ हुन आउँछ ।